Toriteny 27 aprily 2014, Jaobily 15 taona SLK | FJKM Amboniloha
Toriteny 27 aprily 2014, Jaobily 15 taona SLK
« MAMONJY AMIN’NY FAHAFATESANA NY TOMPO »
Alahady farany hibanjinantsika ny lohahevitra hoe : «Mamonjy amin’ny fahafatesana ny Tompo ».
Alahady ihany koa izay nosafidian’ny Sampana Lehilahy Kristiana ankalazana ny ivon’ny jobily faha 15 taona nijoroan’izy ireo teto amin’ny fiangonana FJKM Amboniloha Jerosalemako.
Lioka 7 : 16d : «Ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony »
Raha nankany Naina I Jesoa, dia nahita vehivavy iray mpitondratena nitomany, ka dia honena an-dravehivavy izy. Vao nahita azy Jesoa dia hoy izy : “aza mitomany”. Ary nakeo amin’ilay zazalahy maty indray izy ka nanendry ny tranovorona dia hoy izy: “miarena” ka dia niarina tokoa ilay zazalahy ka nateriny teo amin’ilay vehivavy mpitondratena.
Jesoa Kristy dia mamonjy avy hatrany, tsy mijery tavan’olona izy, tsy mijery saranga ihany koa fa avy hatrany Izy dia mamonjy. Isika rehetra dia samy manana ny olana sedraina tsirairay avy, samy manana ny endri-pahafatesany isika. Amin’izao fotoana izao fotoana izao ohatra dia endri-pahafatesana ny fanolanana misy etsy sy eroa, ny andiam-balala, ny lozam-pifamoivoizana marobe…
Ny olombelona tsy tsy hilaozan’olana, manana ny fahafatesany avy isika; tonga eto anefa Jesoa milaza aminao hoe: “ Miarena”. Manàna finoana fa mamonjy antsika amin’izay sarotra ny Tompontsika.
Ilazao daholo ary ny namana, havana sy tapaka rehetra any fa Jesoa dia manasitrana, manafaka amin’ny sarotra eo no eo.
Ho amintsika ary ny famonjena, ny fahasoavana, ary ny fitiavana.
Nitory ny teny: Andriamananjezika Fehizoro
Filohan’ny SLK SPAA 10
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 29 avril 2014